Mobiles iri kacha mma n'ahịa (emelitere) - Septemba 10 | Androidsis
Ọ bụrụ n ’ị na - eche echiche idogharị ekwentị ochie gị maka nke ọ bụla ihe kacha mma mobiles na ahịaO nwere ike ịbụ na ị chọpụtaworị na, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iju gị anya na mbụ, nke a bụ ọrụ dị mgbagwoju anya. Ngalaba ekwentị mkpanaaka bụ otu n'ime ahịa jupụtara na ahịa, yana ọtụtụ ụdị na ndị nrụpụta yana karịa ihe niile, na ọtụtụ, ọtụtụ ụdị, nwere atụmatụ dị iche iche, na ọnụahịa dị iche iche, wdg. Kedu otu esi amata nke bụ ọdụ kacha mma?
Na Androidsis anyị maara na ọtụtụ n'ime gị, n'otu oge ma ọ bụ ọzọ, ga-ahụ onwe gị n'ọnọdụ a, yabụ anyị chọrọ inyere gị aka ịme nhọrọ gị mfe. Anyị ga-eme ya ugboro abụọ. N'otu aka, na ndepụta nke anyị ga-etinye 10 kacha mma mobiles na ahịa; n'aka nke ọzọ, mara na mkpa gị dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche, na ụdị ọhụụ na-apụta mgbe niile, anyị ga-enye gị usoro nke Atụmatụ iji duzie gị mgbe ị na-azụta ekwentị mkpanaaka.
1 The 10 kacha mma mobiles na ahịa
1.8 Ezigbo PH-1
1.9 Na-asọpụrụ 8 Pro
2 Ihe ị kwesịrị ichebara echiche mgbe ị na-azụ ekwentị kacha mma
2.1 Ihuenyo: nha na mma
2.2 Formanrụ ọrụ na ike
2.3 Usoro njikwa
2.4 Nchekwa ime
2.6 Akụkụ ndị ọzọ anyị nwere ike / kwesịrị ịtụle
N'ebe a, anyị na-ewetara ndị taa a ga-ewere dị ka 10 kacha mma mobiles na ahịa. Na nke a, anyị emebeghị oke ọnụahịa ka anyị na-aga maka nsogbu ọ bụla, dịka ị ga-ahụ, enweghị ekwentị zuru oke, ebe ọ bụ na ha niile nwere uru na ọghọm ụfọdụ. N'aka nke ọzọ, echefula na ndepụta a kacha mma ka aro, maka isi ihe atọ:
Nke mbu, kwa onwa ohuru na eweputa ndi ozo ma emelitere ndi ozo, obu ezie na anyi ga-agbali ime ka nhoputa anyi di nma, enwere ike enwere ihe nlere nke anyi amutaghi.
Nke abuo, ndepụta a abụghị ọkwa, kama nhọrọ nke ekwentị kacha mma kachasị mma n'ahịa.
Nke atọ, Na omume, ekwentị kacha mma ga-abụ nke kacha egbo mkpa gị na atụmanya gị.
Ọtụtụ ndị elebanyela anya dị ka smartphone kacha mma nke 2017, ruo ugbu a, ihe ọhụrụ Galaxy S8 y S8 Plus sitere na Samsung na-anọchite anya mmụba dị ukwuu karịa ọgbọ gara aga, yana OLED meziri nke na-eji ohere nke ihu nke ọnụ, UFS 2.0, NFC, Bluetooth 5.0 nchekwa ngwa ngwa (ọ bụ otu n'ime ọdụ mbụ iji tinye njikọ a), Igwefoto dị elu nwere ihe mmetụta Sony, 4 GB nke RAM, Snapdragon 835 processors na United States, China na Japan, na Exynos 8895 na mba ndị ọzọ ...
Si na South Korea abia ohuru LG ohuru, LG G6, enweghị obi abụọ otu nke kasị mma mobiles na ahịa, nke nwere ihuenyo 5,7 nke anụ ọhịa na-ewe uru nke ihu, nke e ji ígwè na iko mee, Snapdragon 821 processor, 4 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa UFS, ikuku ikuku, IP68 mmiri na uzuzu uzuzu, ekwe omume nke imekotaotuugbo abụọ ngwa ọdịnala na ihuenyo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
The kasị ibu emeputa ke China na-ewetara anyị ya ọhụrụ flagship, na Huawei P10, na a dịgasị iche iche na agba na ihe "ọbụna iPhone" imewe ma ọ bụrụ na o kwere omume. 3.200 mAh batrị, USB-C njikọta, Kirin 960 processor, 4 GB nke Ram, 64 GB nke nchekwa, 5,15-inch ihuenyo nwere oke mma nke agba, agba na iche, LTE antennas mere ndokwa na 4 × 4, ma ọ bụ 12 na 20 megapixel Leica sensọ, nke nwere ụfọdụ atụmatụ ya kachasị pụta ìhè.
Nnukwu onye China ahụ na-apụta ọzọ na nke a dị ịtụnanya ma mara mma nke nwere azu ejirila ugegbe mee. O nwere ihuenyo FHD nke 5,15 nke anụ ọhịa, Snapdragonm 835 octa-core processor, 6 GB nke RAM, 64 GB nke UFS 2.0 nchekwa, igwefoto abụọ megapixel abụọ nwere ike ịdekọ vidiyo na 12K na 4 fps, ngwa anya stabilizer, NFC, wdg. Ọzọkwa, na ọnụahịa nke ahụ bụ n'okpuru 500 euro, ihe fọrọ nke nta ọkara nke ihe Galaxy S8 na-efu.
The Taiwanese ike ọnọde ọzọ nke kasị mma mobiles na ahịa taa, na HTC 10, ama nwere ihe ngosi 5,2-inch, ihe eji emepụta ọla mara mma, igwefoto 12-megapixel, quad-core Snapdragon 820 processor, 4 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa dị ka ọkọlọtọ, ndị na-ekwu okwu abụọ, batrị 3.000 mAh na otutu ihe.
The Xperia XZ sitere na ụlọ ọrụ Japan bụ Sony bụ otu n'ime mobiles kachasị mma na ahịa. Ọ na-enye anyị ihuenyo IPS nke 5,2 sentimita asatọ FullHD na nits 650, yabụ, n'ehihie, ọ na-adị okomoko. Na mgbakwunye, ọ na - ejikọ quad-core Snapdragon 820 processor esonyere 3 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa dị n’ime. Dị ka ị ga-atụ anya ya, ọ na-eji a IMlọ IMX300 ihe mmetụta nwere igwefoto megapixel 23 na-edekọ na 4K. Otú ọ dị, ya na batrị 2.900 mAh ahụ Xperia XZ O nwere ike ọ gaghị adabara ndị na-eji oke egwu ma na-etinye oge dị ukwuu site na oghere.
Onye na-enyocha ọchụchọ ahụ ziri ezi na mmalite nke 2016 nke akara ọhụrụ ya nke Pixel smartphones. Emepụtara site na HTC, ọ nwere nhazi aluminom na otu iko n'elu azụ (ebe ihe mmetụta mkpịsị aka dị). N'ime, ndị Google pixel Ọ gụnyere ihe nhazi Snapdragon 821, 4GB RAM, 32GB nke UFS 2.0 nchekwa na-enweghị agụ microSD, yana gam akporo Nougat. Na mgbakwunye, o nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa na 12,3-megapixel isi igwefoto nwere oghere f / 2.0.
Agbanyeghị na naanị United States ka enwere ike idobe, onye kere ihe gam akporo, Andy Rubin, ewebatala PH-1 nke usoro dị mkpa, ama ama nwere 5,71 sentimita asatọ nke Gorilla Glass 5 kpuchitere na-eji ohere zuru oke nke n'ihu.
A na-esonyere ya na nhazi Snapdragon 835, 4GB nke RAM, 128GB nke nchekwa dị n'ime, USB-C, batrị 3.040 mAh na igwefoto isi abụọ nwere ihe mmetụta 13-megapixel.
Na-asọpụrụ 8 Pro
Ọ bụrụ na ị maghị, Honor bụ akara nke abụọ nke Huawei, ọ na-eju anyị anya na nke a Na-asọpụrụ 8 Pro ịrịba imewe na arụmọrụ (Kirin 960 processor na 6 GB nke RAM na 64 GB nke ROM) nke na-abịa na gam akporo Nougat, nnukwu ihuenyo 5,7-anụ ọhịa QHD, yana nnwere onwe nke batrị ya dị ka ọkọlọtọ, 4.000 mAh. N'ezie, ọ nweghị igwefoto kachasị mma n'ahịa, n'agbanyeghị megapixels 12 nke igwefoto ya isi abụọ, ọ nweghịkwa nchebe megide mmiri na ájá, ihe anyị na-ahụ n'ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ yiri ya.
Anyị na-ejedebe na nke ahụ, ma eleghị anya, bụ nke a kacha mara amara na ndepụta a, n'agbanyeghị na ọ bụ nke akara kachasị elu, nke Lenovo Zuk Z2 Pro, onye nwere quad-core Snapdragon 820 processor, Adreno 530 GPU, 4 GB nke RAM, 64 GB nke nchekwa dị n'ime, Batrị 3.100 mAh na sistemụ ngwa ngwa, USB-C njikọ, sọrọ SIM, akara mkpisiaka akara, 5,2-anụ ọhịa IPS ihuenyo na 13 megapixel igwefoto.
Na nke a ka anyị mezue nhọrọ a nke ekwentị kacha mma na ahịa. Nhọrọ siri ike, nri? Ndụmọdụ anyị bụ na ị na-etinye uche pụrụ iche n'akụkụ ndị a kpọtụrụ aha na akụkụ mbụ nke post a, nke adighi eduzi gi nani site na onu ahia ma obu aha nke ika a na, karịa ihe niile, na ị na-achọ mobile na kasị mma suut gị mkpa, ojiji na atụmanya.
Ihe ị kwesịrị ichebara echiche mgbe ị na-azụ ekwentị kacha mma
O doro anya na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime anyị niile ga-ewere ọnụahịa ahụ dị ka isi nkwebi nke mkpebi anyị, agbanyeghị, anyị ga-amatakwa na pricegwọ dị ezigbo ikwu Ọfọn, oge ụfọdụ, ihe na-efu ntakịrị karịa taa na-emecha bụrụ nke ga-aba uru ọfụma ma karịa, ogologo oge, ọ nwere ike ịdị ọnụ ala. Yabụ, n'echefughị ​​ihe ọnụahịa ahụ, kama iwelata ihe dị mkpa, mgbe ị na-ahọrọ ekwentị mkpanaka ọhụrụ anyị ga-elebara anya n'ihe ndị dị ka ndị a.
Ihuenyo: nha na mma
Ka ọ dị ugbu a, ihe a na-akpọ phablets (smartphones nwere ihu karịa 5,5 sentimita asatọ) na-enweta ala, agbanyeghị, a ka nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ obere mkpanaka. Eziokwu bụ na, ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ahụ ụzọ, na ịgaghị eji ọnụ gị ka ị gụọ ma ọ bụ lelee vidiyo kpụ ọkụ n'ọnụ na YouTube, Netflix ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ nwere ike ijikwa karịa nke nwere nnukwu ihuenyo. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na nnukwu ihuenyo bụ ihe ị na-adịghị njikere ịhapụ, ị ga-atụle nke ahụ Ọtụtụ ndị nrụpụta na-eji ihu ọma nke ọdụ ụgbọ elu eme ihe iji nyekwuo ihuenyo na obere oghere. N'ezie, na oyiyi oyiyi ị kwesịrị ị na-atụlekwa ụdị panel (LCD ma ọ bụ AMOLED) na mkpebi (HD, FHD, 4k, wdg).
Ọ dịghị onye n'ime anyị chọrọ ka ekwentị ọhụrụ kwụgidere gburugburu ya ọzọ nke isi ihe anyị kwesịrị ilebara anya bụ ike na arụmọrụ. Ọ bụrụ na anyị ga-eme ka a "isi" ojiji (facebook, twitter, email, sọọfụ ịntanetị ...), ndị nrụpụta kachasị mfe ga-enye anyị ahụmịhe dị mma. Otú ọ dị, Ọ bụrụ na anyị ga-enye ya njem na ngwa ndị ọzọ zuru ezu, egwuregwu nwere ezigbo eserese na ndị ọzọ, mgbe ahụ anyị ga-ahọrọ ndị nrụpụta dị ike, na-agba ọsọ ọsọ na ike na-arụ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee.. Iji nye gị echiche, ụfọdụ n'ime ibe ndị ahụ enyere iwu site na ntinye aka ruo na nkwado kachasị elu bụ MediaTek MT6735, Snapdragon 210, Mediatek MT6753, Snapdragon 415 na 430, MediaTek Helio P10, Snapdragon 616 na 617, Kinrin 650, MediaTek Helio P20, Snapdragon 650, MediaTek Helio X20, Exynos 8890, Snapdragon 820, Snapdragon 835, wdg.
N'oge a ọ pụtara: nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo ga-abụ nhọrọ kacha mma ọ bụ ezie na, dị ka anyị si mara, nke a siri ike iru. Ndụmọdụ anyị bụ na ị zụghị ekwentị ọ bụla na-adabereghị, opekata mpe, na gam akporo 6.0 Marshmallow n'ihu.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke gam akporo smartphones nwere nkwado maka kaadị microSD, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ nke ọma nke ngwa gị, ọ bụrụ na ị ga-egwu egwuregwu dị ike, gbaa mbọ hụ na ị nwere ọtụtụ nchekwa. Ihe 16GB adabaghị maka ọtụtụ ndị ọrụ, yabụ mma amalite na 32GB na elu. Na kaadị microSD ị nwere ike ịchekwa foto, vidiyo, egwu gị ... Ma ngwa na egwuregwu ga-aga na nchekwa ekwentị, ọ bụkwa ebe ahụ ka igodo dị.
Ọ bụrụ na ị were ọtụtụ foto, ma ịchọrọkwa ka ha dị mma, ị ga-ahọrọ ama na igwefoto dị mma, mana kpachara anya! enwere akụkụ ndị dị mkpa karịa megapixels:
Nnukwu oghere (a f pere mpe).
Ogologo oge dị mkpụmkpụ.
Nnukwu ihe mmetụta sensọ.
Ogo nke oghere ma ọ bụ ebumnobi.
Ọsọ nke ilekwasị anya.
Na o nwere ngwa anya stabilizer.
The nhazi software.
Na nkenke, ndị nke maara banyere foto ga-amata karịa m ihe ị kwesịrị ilebara anya karị, ma ị ga-ama ya.
Akụkụ ndị ọzọ anyị nwere ike / kwesịrị ịtụle
Tinyere nha na ogo ihuenyo, ike na arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ, igwefoto ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ nke ejiri ya, enwere akụkụ ndị ọzọ anyị ga-ahụrịrị mgbe ịzụrụ ekwentị mkpanaaka ọhụụ. Offọdụ n'ime ha, ndị mkpa ha ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'iji anyị nye ya ma ọ bụ atụmanya anyị:
Mmiri na uzuzu na-eguzogide.
4G Njikọ njikọta.
Fast Nchaji usoro ndakọrịta.
You ga-etinye ngwaọrụ ndị ọzọ na ndepụta a kacha mma mobiles Site n'ahịa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The 10 kacha mma mobiles na ahịa
Erik onye ohi dijo
Ọ bụghị OnePlus na ndepụta ahụ?
Ànyị na-egwu egwu ma ọ bụ gịnị?
Onye OnePlus 3T mara mma nke kachasị mma n'afọ gara aga. Onye OnePlus 5 nke afọ a na-achọ ịmegharị, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala iru eru maka ikpo okwu na ekwughi ọbụna ha?
Voicer, ngwa ahụ nke na-agbanwe audios WhatsApp ka ọ bụrụ ederede